Sichuan Jueneng Filter Qalabka Diyaarinta Carwada 124-aad
(Sharax kooban oo kooban) Shirkadu waxay ahmiyad weyn siineysaa Carwada Canton deyrta waxayna sameysay diyaar garow firfircoon tan. Qabanqaabada soo socota ayaa la sameeyay: Hoolka bandhigga shirkaddu waa alaabada daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka iyo carwadda qalabka caafimaadka ee aagga loo yaqaan 'Area B. Th ...
(Sharaxaad kooban) Lu Lin, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda, ayaa lagu casuumay inuu kaqeyb galo shir sannadeedka agabka caafimaadka ee Shiinaha ee Beijing 6da May, 2019. Wuxuu kala hadlay shirkadaha hormoodka ka ah warshadaha iyo macallimiinta Jaamacadda Donghua sida ay tahay isbeddelka qalabyada caafimaad ee mustaqbalka. ...
2018 Sichuan Ju Neng Dayrta Canton Fair waxay ku dhammaatay si guul ah
6dii fiidnimo ee Noofambar 4, 2018, Bandhiggii Dayrta ee Dayrta, oo ay ka soo qayb galeen Sichuan Ju Neng, ayaa si guul leh loogu soo gabagabeeyey! Bandhigu wuxuu qaatay 5 maalmood wuxuuna helay wadar dhan 127 macaamiil dibedda ah oo ka kala yimid adduunka oo idil. Macaamiisha ayaa muujiyey xiisaha weyn ee ay u qabaan badeecooyinka aan tolmada lahayn ee dhalaalay iyo ...
Maaskarada ma difaacdaa dadka iyaga xiran ama dadka ku hareeraysan?
“Waxaan u maleynayaa inay jiraan cadeymo ku filan oo sheegaya in faa iidada ugu fiican ay tahay dadka qaba COVID-19 inay ka ilaaliso inay siiyaan dadka kale COVID-19, laakiin wali waxaad ka heleysaa faa iidada maaskarada xirashada haddii aadan sameyn ' t ha haysato COVID-19, ”ayuu yidhi Chin-Hong. Maaskarada ayaa laga yaabaa inay waxtar badan u yeelato sidii “ilo ku ...
Talooyin ku saabsan Xirashada Maaskarada Wejiga Maalinlaha ah
Raac talaabooyinkan si aad u xidhato, uga baxdo oo u xidhato maaskaro 3M waji-maalinle ah. Maaskarada maalinlaha ah waxay ku habboon yihiin xirashada maalinlaha ah ee goobaha dadweynaha, waa la dhaqi karaa oo dib ayaa loo isticmaali karaa qiime muddo dheer soconaya. Maaskaradayada wajiga maro aan caafimaadka ahayn waxay leeyihiin laba lakab oo ah cudbi cudbi ah, wareegyada dhegaha la hagaajin karo iyo sanka gooyo d ...
Taageerayaasha Indian BTS waxay si deg deg ah u ururiyaan lacag kaash ah si loola dagaallamo koritaanka waddanka
Dhibaatada coronavirus Iyadoo ay sii kordheyso dhibaatada coronavirus-ka ee India, taageerayaasha BTS ayaa qaaday tallaabo ay ku aruurinayaan lacag si ay u caawiyaan kuwa u baahan. Toddobaadkii la soo dhaafay, dadaallada gargaarka ee loo yaqaan 'Covid-19' oo ay abaabuleen koox ka socota naadiga taageerayaasha BTS ee loo yaqaan Ciidanka, ayaa waxay ka soo ururiyeen in ka badan laba milyan oo rupees (US $ 29,000). Isuduwidda Hindida ...
Alaabada Kulul - Khariidadda bogga - AMP Mobile 3 Maaskarada Wajiga ee Fly Non-xidhkii, 3ply Maaskaro Maaskaro Waji ah, Maaskaro Ffp3, 3ply Maqaalka Wajiga Qalliinka, Heerka 3 Maaskarada Qalliinka, 3 Lakab Maaskaro La Tuuri Karo Iyadoo Fda,